Nepalese – Protect Your Circle
आफ्नो घेरा सुरक्षित गर्नुहोस्
[घरमा बस्नुहोस् र जीवनहरू बचाउनुहोस्]
ENGLISH SPANISH नेपाली SOOMAALI འབྲུགཔ မြန်မာ KISWAHILI ကညီ العربية دری
अधिक भिडियोहरू हेर्नुहोस्
हाम्रो ग्यालरी भ्रमण गर्नुहोस्
अधिक सम्बन्धित भिडियोहरू फेला पार्न.
[तपाईंको घेराबारे तथ्यहरू]
औसत मानिसहरूले COVID-19 भएर मर्ने 600 मानिसहरू
2–4% लाई चिन्छन्
त्यसको मतलब संक्रमित भएमा तपाईंको घेरामा रहेका 12-24 मर्नेछन् भन्नु हो।
छ फिट टाढा
छ फिट मुनि
काला र खैरा मानिसहरू धेरै कारकहरूका कारण COVID-19 बाट मर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ जसले समुदायमा रहेको संरचनात्मक जातिवाददेखि लिएर स्वास्थ्य स्याहार प्रणालीमा उच्च रक्तचाप, मोटोपन र मधुमेह निम्त्याउँछ। त्यस कारणले तपाईंको घेरा सुरक्षित गर्न अझ महत्वपूर्ण छ! घरमा बस्नुहोस् र जीवनहरू बचाउनुहोस्।
हामी सबै हाम्रा परिवारहरूसँग भेला हुन चाहन्छौं तर संक्रमण भएका अधिकांश मानिसहरू स्पर्शोन्मुख छन्। तिनीहरूमा बिरामी भएको कुनै संकेत वा लक्षणहरू छैनन। त्यसकारण मधुमेह भएका व्यक्तिहरू हजुरआमालाई भेट्न जाँदा, उहाँलाई घातक हुन्छ।
हाम्रो घेरा संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी सबै यस सँगै छौं। घरमा बस्नुहोस् जसकारण हामी यो महामारीको अर्को छेउबाट बाहिर आउँदा हामीले माया गर्ने र प्रिय लाग्ने सबै कुराहरू सुरक्षित गर्न सक्छौ। हामी यसलाई हाम्रो सुरक्षा बनाउन सक्छौं। हामीले पहिले कहिल्यै पार गरेका छौं र हामी यस मार्फत जान्छौं।
तपाईं एक्लो हुनुहुन्न! हाम्रो कम्पनी तपाईंलाई मद्दत गर्नका लागि संसाधनहरूमा धनी छ।
तपाईंलाई COVID-19 भएको छ भनी सोच्नुहुन्छ? लक्षणहरू हेर्नुहोस्
खाद्य वा आश्रय आवश्यकता पर्छ? आपतकालीन खानाका लागि 211 मा फोन गर्नुहोस् वा Foodlink मा जानुहोस्
घरमा असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? Willow को 24-घण्टाको हटलाइनलाई (585) 222-SAFE (7233) मा फोन गर्नुहोस् वा तिनीहरूको 24-घण्टाको सन्देश लाइनलाई (585) 348-SAFE (7233) मा सन्देश पठाउनुहोस्
काम छुट्यो? बेरोजगारीका लागि आवेदन दिनुहोस्
बाल स्याहार आवश्यक छ? बाल स्याहार परिषद्लाई भेट्नुहोस्
न्यू योर्क राज्यको कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी
रोचेस्टर सिटीको कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी
मोनरो काउण्टीको कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी